I-Semalt Expert malunga nokuhlaselwa kweHacking - Njani na?
Njengoko abantu abaninzi bephendukela ekusebenziseni i-intanethi, isisongelo esifanayo siphumelele - ukukhwaza.Ekuqaleni, ixesha elibhekiselelwe kwinkqubo yokufunda iinkqubo zekhompyutha kunye neelwimi zokufunda. Ngexesha, eli thuba lithatha inkohlakalointsingiselo ebonisa ukukwazi ukunqumla inethiwekhi yecomputer okanye ukhuseleko lwenkqubo.
Igor Gamanenko, enye yeengcali ezikhokelayo iSemalt ,ithatha ingqalelo ejulile kwizizathu kunye neenjongo zokuhlaselwa.
Ngokuqhelekileyo, abahlaseli bewebhsayithi bangama-5 iintlobo zokuhlaselwa kumanethiwekhi nakwiikhomputha. Ezi ziquka:
1. Ukusasazwa kweNkonzo yeNkonzo (DDoS) ukuhlaselwa
Ezi zenzelwe ukunciphisa iinkqubo ezingenayo impawu ezikhuselekileyo zokukhusela kunyejolise kwizibuko ezivulekileyo kunye nokudibanisa kwinethiwekhi. Ngokuqhelekileyo, ukuhlaselwa kweDDoS kufuna ukuphazamisa inkqubo ngokuthumela izicelo ezininziobangela ukuba inethwekhi okanye inkqubo iqhube okanye ivalwe. Nangona kunjalo, ezininzi iinkqubo zijamelana nokuhlaselwa kwaye zilula ngokulula.
2. IThrojani Horse
Le software isetyenziswe njenge-freeware okanye i-shareware ebalulekileyo. Isofthiwe ekhethiweyoidla ngokufakela ngokugqithiseleyo ngumphathi webhsayithi ongazi ukuba isofthiwe equlethwe ngokwenene.
Ngokuqhelekileyo, isofthiwe iqukethe iimpawu ezivulela umnyango wangemuva kwenkqubo yakho ukuvumelaukufikelela okungagunyazisiweyo kwinkqubo yakho nanini na usebenzisa isofthiwe. Ngaphandle koko, isofthiwe ine-trigger esetyenziswe ngabanyekwenzeka okanye ngomhla. Xa sele ikhutshwe, isofthiwe ivala inkqubo yakho okanye inethiwekhi. I-Spyware iyisistim esicaka ingoziesetyenziselwa ukuqokelela idatha ekuthengiswa kamva kwiinkampani zokuthengisa.
Le ngqungquthela ebomngcipheko ye-webmasters eyingozi. Kwinqanaba elisisiseko, liyiyoinkqubo enobungozi ekwazi ukuziphindaphinda. Injongo ephambili yintsholongwane kukuhlaselwa nokutshabalalisa inkqubo yomninimzi..Eziqhelekileyoimizekelo yeenkqubo ezinobungozi zibandakanya iFrodo, iCascade neTequila.
Ezi ziindawo ezisebusweni ezixhaphaza ubuthathaka kwiinkqubo ezithile zobuchwepheshe bewebhuukuze wenze ukuba isiphequluli sakho senze imisebenzi engagunyaziswanga.
Lo mfanekiso we-malware ozenzayo ozikhuphayo owenza izinto ezixabisekileyo kwiinkqubo zakho kude kube yileufumana umthwalo onzima kwaye uyeka ukusebenza. Iifomo zenzelwe iintlobo ezithile zeekhompyutheni ezenza zingasebenzi malunga nezinye iinkqubo.
Ngoko ke, kutheni abaxhasi bewebhusayithi benza izinto ezimbi?
1. Ukufikelela nokusebenzisa inkqubo yakho njengengxoxo ye-intanethi ye-intanethi kwimisebenzi engekho mthethweni-ukususelaAbagculeli bavame ukwenza imisebenzi engekho mthethweni, kufuneka bafihle imisebenzi yabo. Ukwenza oku, bathatha amaseva ukugcina umxholo ongafanelekangaokanye ngezonjongo zokunxibelelana.
2. Ukuba ulwazi.
3. Ukuzonwabisa nokuzonwabisa.
4. Abasebenzi be-savvy ngeteknoloji baphunyelelwa kwinkampani okanye ishishini elinomsindo, abaphikisana nabokunokwenzeka ukuba unokuqhekeka inkqubo yakho ekuhlaseleni.
5. Ukwazisa-abanye abagculeli bayakuthanda ukuvakalisa uluntu kwaye baya kwenza nantoni na ukuba baqaphele.
6. Ukuzama okanye ukuvavanya inkqubo-kwezinye iimeko, ii-webmasters zicela iingcali ze-ICTukuphonononga iinkqubo zabo ukwenzela ukufumanisa ubuthathaka babo kumzamo wokunceda ekuphuculeni ukhuseleko.
7. Ngenxa yesifo esaziwa njengeAsperger Syndrome. Abantu abahluphekayo kule mekoabachaseneyo kodwa banikwe amandla okugxila kwingxaki ngexesha elide.
8. Ngenxa yelukuluko..
9. Ukuqwalasela oko osebenza nabo, abatshatileyo, abaxhasi bezoshishino okanye amalungu entsapho afikelela.
10. Ukufumana amalungelo okuziqhayisa.
11. Njengomngeni wengqondo.
12. Ukufumana inkxaso-mali-nangona abaninzi abahlaseli be-website bengenzi nto ngemali, ezinye i-cyberizigwenxa ziphila ngokubandakanya ukukhwabanisa kwekhadi lesikweletu.
Abantu abasengozini yokuhlaselwa kakubi
Iinkampani zokhuseleko lwe-intanethi-ezi festile zinokukhuseleka kokubakho konke
Iifayile eziphezulu zeefayile-iwebhusayithi yezopolitiko kunye neenkampani ezizwe ngamazweNgokuqhelekileyo ithagethi elingenakunqunyulwa kubaxhasi abafuna ukufumana amalungelo okuziqhayisa.
Nabani na oneendawo zorhwebo-nakuba i-e-commerce zijoliswe kakhulu ngabaphuli be-cyber,Abahlaseli abazikhumbuli ukuvala phantsi nayiphi na inkqubo ekhuselekileyo.
Indlela inqabiseko yewebhusayithi eyenziwa ngayo ingozi
Ukukhwabanisa iiwebhsayithi kunokuba kunomdla kakhulu. Kubonakala ukuba amashishini athathakababenomqondiso wokungcungcutheka, kodwa babengacingi ukuba usulelo luya kufakwa kwiwebhusayithi. Ukufikelela ukulawula kweshishini lakho kuthethaidili enkulu. Ukufikelela kwi-control, i-hacker yenza uchungechunge lwemizamo yomsebenzisi nephasiwedi yakho. Iinkcukacha zakho zinokutshintshwaukusuka kwimiba ethile ukuya kwelinye ngokuchithwa okufanelekileyo okwenziwe ngu-hacker.
Enye indlela yokwehliswa yi-software engozini. Akunjalokufuneka ube yesoftware yakho efakwe, kodwa kunye nezikhangeli zakho. I-hacker ingafikelela kwiinkcukacha zakho ngokulawula isiphequluli sakho.
Njengomnikazi wewebhusayithi, kufuneka usebenze ngendlela yokukhusela iwebhusayithi yakhoziqhekeke. Ukugxininisa kwindlela iindwendwe ezifikelela kwiwebhusayithi yakho yezo shishino yinto enye enokukunceda ukukhusela isayithi lakho. Qinisekisa ukuba akukhoiinkcukacha ziboniswa. Yenza indawo yakho yomsebenzisi-friendly ngokubheka ukhuseleko lakho kwiwebhusayithi.